ओसाका! १ Best उत्तम पर्यटक आकर्षणहरू: डोटनबोरी, उम्मेडा, युएसजे आदि। Best of Japan
डोटनबोरी नहरमा पर्यटन डु boat्गा र प्रसिद्ध ग्लिको रनिंग म्यानको स sign्केत डोटनबोरी सडक, नाम्बा, लोकप्रिय शॉपिंग र मनोरन्जन जिल्ला। ओसाका, जापान = शटरस्टक
"ओसाका टोकियो भन्दा बढी रमाइलो शहर हो।" ओसाकाको लोकप्रियता हालै विदेशबाट आएका पर्यटकहरूको बीचमा बढेको छ। ओसाका पश्चिमी जापानको मध्य शहर हो। ओसाका वाणिज्य द्वारा विकसित गरिएको छ, जबकि टोकियो समुराई द्वारा निर्मित शहर हो। त्यसो भए, ओसाकाको लोकप्रिय वातावरण छ। ओसाकाको डाउनटाउन क्षेत्र आकर्षक छ। सडक खाना सस्तो र स्वादिष्ट हुन्छ। यस पृष्ठमा, म यस्तो रमाइलो ओसाकाको बारेमा परिचय दिनेछु।
मिनामी: डोटनबोरी, नाम्बा, शिन्साबाशी
युनिवर्सल स्टुडियो जापान (USJ)
टेम्पोजान हार्बर गाउँ
डोटनबोरी वाकि Street स्ट्रिट, ओसाका, जापान = शटरस्टक
तलको नक्सा छविमा क्लिक गर्नुहोस् Google नक्सा अलग पृष्ठमा हेर्नका लागि। कृपया हेर्नुहोस् यहाँ JR ट्रेनको मार्ग नक्शा, निजी रेलवे र सबवेका लागि।
ओसाका, मिनामी (अर्थ जापानीमा दक्षिण) र किटा (जसको अर्थ उत्तर) मा दुई शहर शहरहरू छन्।
मिनामीको केन्द्रमा, डोटनबोरी र नाम्बा जस्ता प्रख्यात जिल्लाहरू छन्। यहाँ, फ्ल्यास नियोनले टुरिस्टको ध्यान एकत्रित गर्दछ, माथिको तस्विरमा देखिएझैं। यस क्षेत्र मा, तपाईं Takoyaki रूपमा स्वादिष्ट सडक खाना को एक धेरै आनन्द लिन सक्नुहुन्छ। यदि तपाईं ओसाका जानुहुन्छ भने, म डाटनबोरी र नाम्बा वरिपरि घुम्न सिफारिस गर्दछु।
किताको मुटुमा उम्मेद भनिने जिल्ला छ। उम्मेद डोटनबोरी र नाम्बा भन्दा थोरै सुन्दर हुन सक्छ। उम्मेदको वातावरण टोकियोसँग मिल्दोजुल्दो छ। यस क्षेत्रमा धेरै गगनचुम्बी भवनहरू छन्।
यी दुई शहर क्षेत्रहरू बाहेक, हालसालै, खाडी क्षेत्रमा अवस्थित युनिभर्सल स्टुडियो जापान (USJ) धेरै लोकप्रिय छ। र ओसाका कासल, परम्परागत ओसाका स्थलचिन्ह, धेरै पर्यटकहरूको भीडले भरिन्छ।
म ओसाकामा झन्डै तीन बर्षदेखि बसिरहेको छु। म टोकियोमा हुर्कें, त्यसैले म धेरै छक्क परें कि ओसाकाका मानिसहरू टोकियो भन्दा केही फरक छन्। सामान्यतया, ओसाकाका मानिसहरू धेरै स्पष्ट छन्। ओसाका मित्रवत मानिसहरूलाई तपाईले भेट्न सक्नुहुन्छ। ओसाकामा मानिस टोकियोको तुलनामा फूर्तिलो चीजहरू मन पराउँछन्। तपाई निश्चित रूपले डोटनबोरीमा खास गरी महसुस गर्नुहुन्छ।
ओसाकामा दुई एयरपोर्टहरू छन्, दक्षिणमा कन्साइ एयरपोर्ट र उत्तरमा इटामी एयरपोर्ट। कन्साइ एयरपोर्टबाट Namba सम्म Nankai रेलवे एक्सप्रेस द्वारा लगभग 40 मिनेट छ। इटामी एयरपोर्ट उमेदाको बारे मा ora० मिनेट मोनोरेल र ट्रेन द्वारा छ।
उम्मेदमा JR ओसाका स्टेशन बाट क्योटो स्टेशन सम्म, एक्सप्रेस ट्रेन द्वारा यो लगभग minutes० मिनेटको हुन्छ। यो लगभग २ घण्टा minutes० मिनेट Shinkansen द्वारा शिन ओसाका स्टेशन बाट टोकियो को लागी हो।
सडक विक्रेता बेच्ने खाना, ओसाका, जापान = शटरस्टक
मिनामी विशाल क्षेत्रको लागि जेनेरिक नाम हो जुन डोटनबोरी, नाम्बा, शिन्साइबाशी, सेन्चिमाए। क्षेत्र बीच, डोटनबोरी र नाम्बा विदेशी पर्यटकहरु बीच विशेष गरी लोकप्रिय छ। यस क्षेत्रमा धेरै अनौपचारिक रेस्टुरेन्टहरू र स्ट्रिट फूडका पसलहरू लाइनमा छन्।
ओसाका, जापानमा डोटनबोरी
डोटनबोरी डुटनबोरी नदीको वरिपरि शहरको शहर हो।
डोटनबोरी नदी सटीक हुनको लागि १aऔं शताब्दीमा निर्माण गरिएको यो नहर हो। यस नदीको किनारमा काबुकी र जोरीको थिएटर तोकुगावा शोगुनेटको समयदेखि नै निर्माण गरिएको थियो। रेस्टुराँ र बारहरू त्यस वरिपरि जम्मा भए र आज जस्तो जीवन्त जिल्ला बने।
यस नदीको छेउमा जीवन्त फ्ल्याश साइनबोर्डहरू छन्। ती मध्ये, प्रसिद्ध एक ओसाकामा मिठाई उत्पादक इजाकी ग्लिको द्वारा स्थापित पुरुष धावकको इलेक्ट्रिक साइनबोर्ड हो। यो पुरुष धावक चिन्ह १ 1935 .XNUMX मा निर्माण गरिएको थियो। वर्तमान चिन्ह छैठौं पुस्ता हो।
टोन्बोरी नदी क्रूज र टोनबोरी रिभरवाक
ओसाका सिटी, जापान = शटरस्टकमा डोटनबोरीमा राती शपिंग सडकमा यात्रा गर्ने पर्यटक
टोन्बोरी नदी क्रूज
डोटनबोरी नदीमा, एक मिनी क्रूज जहाज "टोन्बोरी रिभर क्रूज" संचालन गर्दैछ। "टोन्बोरी" डोटनबोरी नदीको उपनाम हो। तपाईं दिन वा रात लगभग २० मिनेट को क्रूजको मजा लिन सक्नुहुन्छ। जहाजहरू Tazaemonbashi ब्रिज डकबाट प्रस्थान गर्दछन्।
ओसाकामा, प्रसिद्ध काबुकी कलाकारहरूले कहिलेकाँही डु boat्गामा "टोबोरी" परेड गर्छन्। के तपाईं नदीका दृश्यहरू साथै अभिनेताहरू हेर्न चाहनुहुन्छ?
डोटनबरी नदीको किनारमा त्यहाँ एक टमब्नेरी "टोन्बोरी रिभरवाक" छ। कहिलेकाँही युवा संगीतकारहरू यस बोर्डवाकमा प्रदर्शनहरू देखाउँछन्। नदीको छेउमा यहाँ स्वादिष्ट सडक फूडहरू छन्। सडकको खाना जस्तै Takoyaki खाँदै हिंड्ने प्रयास गर्नुहोस्!
डोटनबोरी कोनामोन संग्रहालय
ओसनका, जापानमा DEC 1, २०१ on मा डोटनबोरी कोनामोन म्यूजियम यसको विशाल अक्टोपस साइन इनको साथ। यो जहाँ मान्छे कोनामोन को इतिहास को बारे मा जान्न को लागी र ताजा बनाईएको तकोयाकी = शटरस्टक को मजा लिन सक्छन्
जब तपाईं डोटनबोरी भएर जानुहुन्छ, तपाईंले माथीको चित्रमा देखिने विशाल अक्टोपस चिन्ह देख्नुहुनेछ। यो थिम पार्क "डोटनबोरी कोनामोन म्यूजियम" हो जसले सडक फूड परिचय गर्दै जस्तै टाकोयाकी। यहाँ, तपाईं धेरै स्वादिष्ट Takoyaki खान सक्नुहुन्छ। थप रूपमा, तपाईं आफैंबाट टाकोयाकी बनाउने अनुभव गर्न सक्नुहुनेछ।
यहाँ पनि Takoyaki को बारे मा बिभिन्न प्रदर्शनहरु छन्। मैले एक महिलालाई कभर गरेको छु जसले पहिले डोटनबोरी कोनामोन संग्रहालय स्थापना गरे। मैले उनीबाट टाकोयाकीप्रति अत्यन्तै स्नेह महसुस गरें। यदि तपाईं यो संग्रहालयमा जानुभयो भने, तपाईं पक्कै पनि ओसाकाको टाकोयाकीसँग परिचित हुनुहुनेछ।
Namba एक शहर शहर Namba स्टेशन (Nankai रेलवे) र ओसाका Namba स्टेशन (Kintetsu / Hanshin रेलवे) वरिपरि फैलिएको छ। तपाईं डोटनबोरीबाट नाम्बा हिंड्न सक्नुहुन्छ।
दर्शनीय स्थलहरू भेट्न चाहन्छु जुन तपाइँ नम्बाको लागि सिफारिश गर्न यहाँ हुनुहुन्छ।
कुरोमन बजार ठूलो शपिंग सडक हो जुन नाम्बा स्टेशनबाट about मिनेट जति अवस्थित छ। यहाँ करीव २०० पसलहरू छन् जस्तै ताजा माछा, मासु, तरकारीहरू, फलफूल र कन्फेसनहरू। यस सडकमा बेचेको खाना सामान्यतया उच्च गुणको हुन्छ, त्यसैले ओसाका प्रोफेशनल शेफहरू किन्न आउँदछन्।
हालसालै यस सडकमा धेरै विदेशी पर्यटकहरू आएका छन्। त्यसो भए यस सडकमा पर्यटकहरू रमाईलो गर्न विभिन्न मूल सडकका सामानहरू बेचिदैछन्। तपाईं यहाँ स्वादिष्ट खाना र परम्परागत बजार वातावरण आनन्द लिन सक्नुहुन्छ।
>> कुरोमन बजार को विवरणको लागि कृपया आधिकारिक वेबसाइटमा हेर्नुहोस्
Takashimaya डिपार्टमेन्ट स्टोर
नानाबा ओसाका जापानमा टकशिमया डिपार्टमेन्ट स्टोर = शटरस्टक
ओसाकामा धेरै ठूला डिपार्टमेन्ट स्टोरहरू छन्। मिनामीमा सबैभन्दा लोकप्रिय डिपार्टमेन्ट स्टोर तकाशिमाया हो जुन नन्काई रेलवेको नम्बा स्टेशनमा अवस्थित छ।
टकाशिमायाले टोकियो, क्योटो, योकोहामा र अन्य स्थानहरूमा पनि स्टोरहरू सञ्चालन गर्दछ, तर यो Namba पसल प्रधान कार्यालयको रूपमा स्थित छ। यो पसल लोकप्रियताका लागि ओसाकाको उत्तरी भागको उम्मेडामा हन्कियु डिपार्टमेन्ट स्टोरसँग प्रतिस्पर्धा गर्दछ। यदि तपाईं मिनामीमा डिपार्टमेन्ट स्टोरमा किनमेल गर्न चाहानुहुन्छ भने, म तपाईंलाई सिफारिस गर्दछु कि तपाईं टाकाशिमैया जानुहोस्।
ओसाकाको अबेनो जिल्लाको "अबोनो हारुकासु" जापानको सबैभन्दा अग्लो भवन हो जुन 300०० मिटर उचाईको छ। यो भवनसँग अवलोकन डेक र होटल = AdobeStock छ
सार हार्कस वेधशाला 'HARUKAS 300', वसन्त २०१ OP मा खुल्ला। ground०० मिटर माथि जमिन जापान मा शीर्ष गगनचुम्बी भवन 'Abeno Harukasu' = शटरस्टक
ओसाकाको दक्षिणी भागमा, मिनामी बाहेक त्यहाँ धेरै अनौंठो दर्शनीय क्षेत्रहरू छन्। ती मध्ये एबेनो विशेष गरी ध्यान आकर्षित गर्दैछन्।
Abeno Namba को3किलोमीटर दक्षिण पूर्व मा अवस्थित छ। यो शहरमा, जापानको सब भन्दा अग्लो भवन "अबोनो हारुका" २०१ 2014 मा खोलियो। यो 300०० मिटर अग्लो छ, 60० मिटर माथि छ। Th 58 औं - th० औं तलामा "Harukas 60" नामको भुक्तानी अवलोकन डेक छ। यस डेकसँग बीचमा खुला डेक छ जुन माथिको दोस्रो चित्रमा देखाइएको छ। यसको वरपरको अवलोकन मार्ग ग्लास गरिएको छ। त्यसोभए, यहाँ तपाईले महसुस गरिरहनु भएको अनुभव अनुभव गर्न सक्नुहुन्छ जुन तपाई आकाशमा तैरिरहनु भएको छ। किनकि यो वर्षभरि २२ बजेसम्म खुला रहन्छ, तपाईं रातको दृश्यको आनन्द लिन सक्नुहुन्छ।
Abenobashi स्टेशन (Kintetsu रेलवे) र टेन्नोजी स्टेशन (JR) प्रत्यक्ष Abeno Harukas संग जोडिएको छ। थप रूपमा, यस गगनचुम्बी भवनमा किन्टेत्सु डिपार्टमेन्ट स्टोर र ओसाका मैरियट मियाको होटल छन्।
>> विवरणका लागि कृपया Abeno Harukas को आधिकारिक वेबसाइट हेर्नुहोस्
राति शिन्सेकाई (नयाँ विश्व) जिल्लाको सुतेनकाकू टावर। सुटेनकाकू टावर ओएसएकेए = शटरस्टकको प्रसिद्ध ल्यान्डमार्कको रूपमा परिचित छ
यदि तपाईं २० औं शताब्दीको शुरुदेखि मध्य बीचमा रेट्रो ओसाका अनुभव गर्न चाहानुहुन्छ भने तपाईं शिन्सेकाई (जापानी भाषामा नयाँ विश्व) मा जान सक्नुहुन्छ। यहाँ Suutenkaku नामको पुरानो धरहरा र रेट्रो सडक "jan-jan Yokocho" छ।
जान-जान योकोचोमा लोकप्रिय इजाकाया (जापानी शैलीको बारहरू), डीप-फ्राइड स्कीवर्सको पसल, पाचिन्को (जापानी पिनबल) पार्लर, मनोरन्जन हलहरू, वयस्क चलचित्र थिएटरहरू र यस्तै अरू छन्। वरपरको क्षेत्रमा कामदारहरूको लागि सरलीकृत आवास सुविधाहरू छन्।
Shinsekai Ebisucho मेट्रो स्टेशन को लागी अवस्थित छ। Shinsekai माथिको Abeno Harukas नजिक छ, तर यसको वातावरण एकदम विरोधाभासी छ।
ओसाका, जापानको शिन्सेकाईको सुतेनकाकू टावरमा सुतेनकाकू छतको मोरको पेन्टि = = शटरस्टक
शिन्सेकाइको ल्यान्डमार्क सुतेनकाकू टावर हो जुन १० 108 मिटर अग्लो छ। यो टावर १ 1956 XNUMX मा निर्माण गरिएको दोस्रो पुस्ता हो।
पहिलो सुतेनकाकू सन् १ 1912 १२ मा निर्माण गरिएको हो। उचाई करीव meters 75 मिटर थियो। ती दिनहरूमा यो पूर्वको सब भन्दा अग्लो भवन थियो।
यस्तो देखिन्छ कि सुतेनकाकू पेरिसको आर्क डे ट्रायोम्फे र एफिल टावरको नक्कल गर्न डिजाइन गरिएको थियो। यो एक अनौंठो डिजाइन हो जस्तै एफिल टावरलाई आर्क डे ट्राइम्फमा राख्नु।
यो टावर वर्षभरि २१ बजेसम्म खुला रहन्छ। नियन पनि राती प्रज्ज्वलित हुनेछ। यदि तपाइँ इच्छुक हुनुहुन्छ भने कृपया भ्रमण गर्नुहोस्।
नाइटस्केप, ओसाका, उम्मेडा = शटरस्टक
ओसाकाको उत्तरी भागमा त्यहाँ एक विशाल शहर क्षेत्र हो जसलाई "किटा" भनिन्छ (जसको अर्थ जापानीमा "उत्तर" हो)। केन्द्रमा स्थित ओमेडा ओसाका स्टेशन (JR) र उमेदा स्टेशन (Hankyu / Hanshin / सबवे) संग छ।
उमेदा पश्चिमी जापानको सबैभन्दा ठूलो डाउनटाउन क्षेत्र हो। उम्मेद नानबा र "मिनामी" को बीचमा डोटनबोरी भन्दा आधुनिक छ, र ठूला भवनहरू लाइनमा छन्। यदि तपाई ठूलो शहरको वातावरणको आनन्द लिन चाहानुहुन्छ, यो राम्रो हुन्छ कि उमेदा बाट हिँड्न।
किनकि उम्मेद्वार उत्तरमा अवस्थित इटामी एयरपोर्टमा अवतरण गर्ने विमानहरूको मार्गमा रहेको छ, २०० मीटर वा सो भन्दा उचाइको साथ स्काईस्क्र्यापर निर्माण गर्न निषेध गरिएको छ। त्यसो भए, त्यहाँ मिनामी जस्ता कुनै गगनचुम्बी भवनहरू छैनन्, तर तपाईं तलको चित्रमा देख्न सक्नुहुन्छ, त्यहाँ धेरै अनौंठो भवनहरू छन् जुन १०० मिटर उचाईमा छन्। किन तपाईं यस्तो भवन देखि ओसाका मैदान मा हेर्न छैन।
यदि तपाई उम्मेदा जानुहुन्छ भने, म २ स्पट सिफारिश गर्दछु। एउटा उमेडा स्काई बिल्डिंग हो। र अर्को Hankyu डिपार्टमेन्ट स्टोर छ।
उमेडा स्काई भवन
रातमा किता -कु जिल्लामा उम्मेद स्काइ बिल्डिंग र फाउंटेनहरूको सम्भावित दृश्य। ओसाका = शटरस्टकमा फ्लोटिंग गार्डन वेधशाला सबैभन्दा लोकप्रिय आकर्षण हो
उम्मेद स्काई बिल्डिंगमा यात्रीहरूको साथ आधुनिक टनेल एस्केलेटर। यो ठाडो यातायात = शटरस्टकका लागि भविष्यमा चलिरहेको बिजुली सीढी हो
उमेडा स्काई भवन एक -०-मंजिला जुम्ल्याहा भवन हो जुन जेआर ओसाका स्टेशनबाट १० मिनेटको दूरीमा अवस्थित छ। यसमा दुईवटा भवनहरू छन् जुन शिखरमा "फ्लोटिंग गार्डन वेधशाला" द्वारा एक अर्कासँग जोडिएको छ। यस भुक्तानी गरिएको वेधशालामा जान, तपाईं पहिले elev the औं तलामा जानुहुन्छ एउटा लिफ्टको साथ। त्यहाँबाट, कृपया stylish th तलामा जानुहोस् स्टाइलिश एस्केलेटरको साथ माथिको दोस्रो चित्रमा देखाइएको छ। Pay thौं फ्लोरमा शुल्क तिर्नुहोस् र th० औं तलामा डेकमा जानुहोस्।
यसबाहेक, यदि तपाईं th० औं तलाबाट छत कोरीडोर "स्काई वाक" मा जानुहुन्छ भने, तपाईं १ 40 मिटर उचाइको हावा महसुस गर्न सक्नुहुनेछ। कौसीको भुइँमा एम्बरिभ कंकडहरू इम्बेड गरिएको छ, त्यसैले तपाईं रातमा मिल्की वेमा भएको जस्तो महसुस गर्न सक्नुहुन्छ।
उम्मेडा स्काई भवनको तहखानेमा, रेट्रो ओसाका सडक पुन: उत्पादन गरिएको छ जसरी तलको दोस्रो चित्रमा देखाइएको छ। "Takimi-koji" भनिने यस सडकमा तपाई ओसकाको एकल खाना जस्तै Takoyaki को मजा लिन सक्नुहुन्छ।
रातमा अमेड स्काइ बिल्डिंगको फ्लोटिंग गार्डन वेधशाला
ओमेका स्काइ बिल्डिंग, ओसाका, जापानको तहखानामा व्यक्ति र पर्यटकहरूको लागि विभिन्न किसिमका रेस्टुरेन्टहरू उपलब्ध छन् = शटरस्टक
Hankyu डिपार्टमेन्ट स्टोर
ओमेडामा हन्कियु डिपार्टमेन्ट स्टोरसँग एक रमणीय कोलोनेड स्पेस छ, ओसाका, जापान = शटरस्टक
ओसाका शहर जापानमा हन्कियु डिपार्टमेन्ट स्टोर ओसाका उम्मेद मेन स्टोर = शटरस्टक
उमेदामा सबैभन्दा लोकप्रिय किनमेल सुविधा हन्कियु डिपार्टमेन्ट स्टोर हो। उमेदाको हान्कियु डिपार्टमेन्ट स्टोरको टोकियोमा इसेटान डिपार्टमेन्ट स्टोरको साथसाथै जापानमा सबैभन्दा परिष्कृत उत्पादनहरू बेच्नको प्रतिष्ठा छ
उम्मेदमा हन्कियु डिपार्टमेन्ट स्टोरको a०,००० वर्ग मिटरको फ्लोर स्पेस छ। यदि तपाईं ओसाकामा किनमेल गर्न चाहनुहुन्छ भने, यो डिपार्टमेन्ट स्टोरमा जानु उत्तम हो। तपाईं माथिको फोटोमा देख्न सक्नुहुनेछ, यस डिपार्टमेन्ट स्टोरसँग विशाल कोलोनेड ठाउँ छ। त्यहाँ सीढी छन् जहाँ तपाईं बस्न सक्नुहुन्छ र रोममा स्पेनिश वर्ग जस्तै आराम गर्न सक्नुहुन्छ।
यस डिपार्टमेन्ट स्टोर मुनि एक क्लासिक प्यासेज छ जुन माथिको दोस्रो तस्वीरमा देखाइएको छ। यो सुन्दर मार्ग उमेदा मा एक लोकप्रिय स्थान हो। यो खण्ड वास्तवमा दोस्रो पुस्ता हो। यस डिपार्टमेन्ट स्टोरको पुनर्निर्माण हुनु अघि पहिलो प्यासेज ओसाकामा अमेरिकी फिल्म "कालो वर्षा" (१21989)) सेटमा देखा पर्‍यो। मैले यो खण्ड पार गर्दा मलाई लाग्छ कि म उम्मेदमा फर्कें।
ओसाका कासल, जापान = शटरस्टक
ओसाका महल वसन्त =तुमा = शटरस्टक
ओसाका महल जापान प्रतिनिधित्व गर्ने एक प्रमुख महल हो। यो महल ओसाकाको चिन्हहरू मध्ये एक हो। महल टावरबाट तपाईं ओसाका शहर देख्न सक्नुहुनेछ।
ओसाका कासलमा त्यहाँ थुप्रै रूखहरू छन्। ओसाका शहरमा केही धनी रूखहरू छन्, त्यसैले यो किल्ला ओसाका नागरिकहरूको लागि मूल्यवान पैदल यात्रा गर्ने ठाउँ हो। मार्चको अन्त्यदेखि अप्रिलको शुरुसम्म महल भित्रका चेरी रूखहरू धेरै सुन्दर र धेरै पर्यटकहरूले भरेका छन्। नोभेम्बर देखि डिसेम्बरको शुरुमा, शरद पातहरू पनि अद्भुत हुन्छन्।
ओसाका महल १ the औं शताब्दीको उत्तरार्धमा जापान एकता पूरा गर्ने योद्धा हिडेयोशी टोयोटोमीले निर्माण गरेका थिए। त्यस समयमा ओसाका कासल जापानको राजनीतिको केन्द्र थियो।
जब १y 1598 in मा हिडयोशीको मृत्यु भयो, टोकियोमा आधार भएको ईयासु टोकगावा राजनीतिको शक्ति थियो र टोकुगावा शोगुनेटलाई स्थापित गर्‍यो। ईयासूले १ 1614१1615-१-XNUMX१XNUMX मा ओसाका कासललाई आक्रमण गरे र टोयोटोमी परिवारलाई ध्वस्त पारे। यस समयमा ओसाका कासल पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएको थियो।
जे होस्, टोकुगावा शोगुनेटले पश्चिमी जापानमा ओसाका कासललाई आधारको रूपमा पुनर्निर्माण गर्‍यो। वर्तमान ओसाका महल यस टोकुगावा शोगुनेटको युगमा निर्माण गरिएको थियो। महल टावर बिजुली द्वारा नष्ट भयो, तर यो १ 1931 .१ मा पुनर्निर्माण गरियो। यदि तपाईं महल टावरमा जानुभयो भने तपाईं ओसाका महलको इतिहासको बारेमा जान्न सक्नुहुनेछ।
ओसाका कासलका लागि, मैले निम्न लेखहरूमा यो पनि परिचय दिएँ, त्यसैले कृपया यदि तपाइँ इच्छुक हुनुहुन्छ भने एक पटक हेर्नुहोस्।
>> ओसाका महलको बारेमा विवरणहरूको लागि, कृपया यहाँ क्लिक गर्नुहोस्
>> ओसाका महलमा चेरी ब्लोसमसे बारेमा विवरणहरूको लागि, कृपया यहाँ क्लिक गर्नुहोस्
वसन्त seasonतुमा ओसाका महलमा चेरी खिलने रूख मुनि पर्यटकहरू ओसाका जापान = शटरस्टक
युनिभर्सल स्टुडियो जापानको ह्यारी पॉटरको विज़ार्डिंग वर्ल्ड। ओभरकामा युनिभर्सल स्टुडियो जापान एक थिम पार्क हो, जापान = शटरस्टक
युनिभर्सल स्टुडियो जापान विभिन्न आकर्षणहरु संग, ओसाका, जापान = शटरस्टक
USJ को बारेमा
युनिभर्सल स्टुडियो जापान (USJ) जापानको टोकियो डिस्ने रिसोर्टसँगै अग्रणी थिम पार्क हो। विश्व मा युनिभर्सल स्टुडियो को धेरै थीम पार्कहरु छन्। यूएसजे तिनीहरूका बीच सब भन्दा लोकप्रिय पार्क हो।
युएसजेको सम्बन्धमा, मैले निम्न लेखमा जापानी मनोरञ्जन पार्क र थिम पार्कहरूको परिचय दिँदै विस्तृत लेखेको थिएँ। त्यो लेखमा मैले युएसजेको सबैभन्दा सिफारिश गरिएको आकर्षणको बारेमा पनि परिचय दिएँ, त्यसैले यदि तपाइँ इच्छुक हुनुहुन्छ भने, कृपया सन्दर्भ गर्नुहोस्।
ओसाकाको युनिभर्सल स्टुडियो जापान (युएसजे) जापानको टोकियो डिस्नीको साथ सबैभन्दा लोकप्रिय थिम पार्क हो। यदि तपाइँ तपाइँका बच्चाहरू, प्रेमीहरू वा साथीहरूसँग ओसाका भ्रमण गर्नुहुन्छ भने, म युएसजे जान सिफारिस गर्दछु। जे होस्, युएसजे धेरै भीडले भरिएको छ, जस्तो टोकियो डिस्ने। र यो धेरै ठूलो छ, त्यसैले कृपया पर्याप्त लिनुहोस् ...
>> USJ को बारेमा विवरणहरूको लागि, कृपया यहाँ क्लिक गर्नुहोस्
USJ मा कसरी पुग्ने
यूएसजे पश्चिमी ओसाकाको खाडी क्षेत्रमा अवस्थित छ। नजिकको स्टेशन जेआर युमेसाकी लाइनमा युनिभर्सल सिटी स्टेशन हो।
उम्मेडाबाट (जेआर ओसाका स्टेशन)
यदि तपाइँ उम्मेदको जेआर ओसाका स्टेशनबाट युएसजे जानुहुन्छ भने, जेआर ओसाका लूप लाइन लिनुहोस् र निशिकुजो स्टेशनको युमेसाकी लाइनमा परिवर्तन गर्नुहोस्। यो लगभग १ minutes मिनेटमा ओसाका स्टेशनबाट USJ सम्म।
नाम्बाबाट (ओसाका नाम्बा स्टेशन)
यदि तपाईं नाम्बाबाट जानुहुन्छ भने, कृपया ओन्साका नाम्बा स्टेशनबाट हन्शिन नम्बा लाइन लिनुहोस् र निशिकुजो स्टेशनको युमेसाकी लाइनमा परिवर्तन गर्नुहोस्। यो लगभग १ minutes मिनेटमा ओसाका Namba स्टेशन देखि USJ सम्म।
यदि तपाइँ USJ लाई तपाइँको यात्राको लागि उत्तम गन्तव्य बनाउँनुहुन्छ भने, म JR युनिभर्सल सिटी स्टेशनको वरपरको होटेलमा बस्न सिफारिस गर्दछु। यस स्टेशनको वरपर युनिभर्सल स्टुडियो जापानमा होटल युनिभर्सल पोर्ट र पार्कफ्रन्ट होटेल जस्ता धेरै राम्रा होटलहरू छन्। यदि तपाइँ तपाइँको बच्चाको साथ युएसजेमा जानुहुन्छ भने, तपाइँ यस क्षेत्रको होटेल बेस गर्न चाहानुहुन्छ विशेष गरी।
यदि तपाईंले डोटनबोरी, उम्मेदा आदि प्रमुख गन्तव्य बनाउनु हुन्छ भने ओसाका नम्बा स्टेशन वा जेआर ओसाका स्टेशन नजिकैको होटेलमा बस्नु राम्रो विचार हो। तपाईं यूएसजे मा धेरै हिंड्ने भएकोले, तपाईं सकेसम्म स्टेशनको नजिकै रहनु पर्छ।
टेम्पोजान हार्बर गाउँ युएसजेको दक्षिण छेउमा खाडी क्षेत्रमा अवस्थित छ। यो एक मनोरन्जन र शपिंग जटिल हो जुन परिवारका साथ पर्यटकहरू बीच लोकप्रिय छ। शटल जहाजहरू युएसजे र टेम्पोजानको बिच संचालित हुन्छ।
व्हेल एक्वेरियम Kaiyukan, ओसाका, Jpan = शटरस्टक
Kaiyukan एक्वैरियम, जेसाफिस, ओसाका, जापान = शटरस्टक
Kaiyukan संसारमा एक ठूलो मछलीघर हो। ओटर, समुद्री सिंह, पेन्गुइन, डल्फिन, व्हेल शार्क, किरण र जेली फिश जस्ता qu०० भन्दा बढी प्रकारका जलीय जनावरहरू हुर्कन्छन्। एक पटक आगन्तुक आठौं तलामा जान्छन्, तिनीहरू तलतिर जान्छन् र विभिन्न एक्वैरियमहरू अवलोकन गर्छन्।
यस एक्वेरियममा सबैभन्दा लोकप्रिय व्हेल शार्कहरू हुन्, जुन संसारको सबैभन्दा ठूलो माछा प्रजाति हो। माथिको पहिलो चित्रमा देखिएझैं, व्हेल शार्कहरू बिस्तारै tank, .०० टन पानी भएको m मी। यस बाहेक, यहाँ सुरुnel-आकारको ट्याks्कहरू छन् जहाँ उष्णकटिबंधीय माछा पौडी हुन्छ, एक्वेरियमहरू जहाँ पेन्गुइनहरू पौडी खेल्दछन्, र यस्तै। साँझमा, तपाईं राती माछाको पारिस्थितिकी पनि अवलोकन गर्न सक्नुहुन्छ।
टेम्पोजान फेरिस व्हील
ओसाका जापानको टेम्पोजन हार्बर गाउँ भनेको एक मनोरञ्जन र शपिंग जटिल हो जुन Kaiyukan मा केन्द्रित छ, विश्वको सबैभन्दा ठूलो एक्वैरियम = AdobeStock मध्ये एक
टेम्पोजान फेरिस व्हीलको उचाई ११२..112.5 मीटर र व्यास १०० मिटर छ। यदि तपाईंले यो फेरीस् पा take्नुभयो, तपाईं ओसाका वरपरको दृश्यहरू जस्तै रोक्को माउन्टेन र कन्साइ एयरपोर्टको बारेमा १ 100 मिनेटको लागि आनन्द लिन सक्नुहुनेछ।
त्यहाँ जम्मा 60० गोन्डोलाहरू छन्। यी मध्ये चार "दृश्य-मार्फत क्याबिनहरू" हुन् जहाँ भुइँ र सिटको भाग पारदर्शी हुन्छ। थप रूपमा, तीनवटा गोन्डोलाहरू संरचित छन् जसले गर्दा ती पाहुनाहरू बोर्डमा चढ्न सक्ने छन् तिनीहरू व्हीलचेयरहरूको साथ छन्।
यदि तपाईं कन्साई अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट प्रयोग गर्नुहुन्छ भने, तपाईं रिंकु टाउन स्टेशन (JR / Nankai रेलवे) बाट रोक्न सक्नुहुन्छ त्यो एयरपोर्टको छेउमा। त्यहाँ किनमेल सुविधाहरू जस्तै आउटलेट मल, शपिंग मल्ल र इलेक्ट्रिक शपहरू छन्। विशेष गरी, विशाल आउटलेट मल "रिंकु प्रीमियम आउटलेटहरू" सिफारिस गरिन्छ।
रिंकु प्रीमियम आउटलेटहरू
रिंकू टाउनमा मुख्य किनमेल गन्तव्यहरू रिन्कू प्रीमियम आउटलेट मल, ओसाका, जापान = शटरस्टक
रिंकु प्रीमियम आउटलेट कन्साई २ प्रमुख आउटलेट मल्ल मध्ये एक हो, जुन कोबे मिटा प्रीमियम आउटलेट (ह्योगो प्रान्त) सँग मिल्दो छ। रिंकु प्रीमियम आउटलेटहरूको साइटमा, करीव ,2०,००० वर्ग मीटर, त्यहाँ २०० भन्दा बढी ब्रान्ड शपहरू लाइनमा छन्। मलाई लाग्छ कि यो आउटलेट मलमा अन्तिम शपिंगको आनन्द लिनु राम्रो विचार हो जुन तपाईं आफ्नो घर फर्कनु भन्दा पहिले नै हो।
>> ब्रान्ड शपमा विवरणहरूको लागि, कृपया रिंकु प्रीमियम आउटलेटहरूको आधिकारिक साइटमा हेर्नुहोस्
अन्तमा, म उत्तरी ओसाकामा केही दर्शनीय स्थलहरूको परिचय दिनेछु। यदि तपाईं उत्तरी ओसाका वा इटामी एयरपोर्टको शिन्कानसेनमा जेआर शिन-ओसाका स्टेशन प्रयोग गर्नुहुन्छ भने, तपाईं यी दर्शनीय स्थलहरू बाट बाटोमा रोक्न सक्नुहुन्छ।
"कपनुडल्स संग्रहालय ओसाका इकेडा" Ikeda स्टेशनको नजिक = शटरस्टक
पर्यटक कार्यशालामा सामिल हुन सक्छन् आफ्नै कप चाउचाउ = शटरस्टक डिजाइन गर्न
के तपाईंले इन्स्ट्यान्ट नूडल्स वा कप चाउचाउ पाउनुभएको छ?
यस्तै मोमोफुकु एन्डो (१ 1910 १०-२००2007) द्वारा आविष्कार गरिएको थियो जसले निसिन फूड प्रोडक्ट्स कम्पनीको स्थापना गरे। निमोन फूड्सले मोमोफुकुको उपलब्धिहरू व्यापक रूपमा परिचित गर्न ओसाका र योकोहामामा एउटा विशेष संग्रहालय खोले। ओसाका संग्रहालय "कपनुडल्स संग्रहालय ओसाका इकेदा" (पूर्व नाम: तत्काल रामेन संग्रहालय) ओकेका प्रान्त, इकेदा शहरमा अवस्थित छ, जहाँ मोमोफुकुको स्थापना भएको थियो। यो ked मिनेटको पैदल यात्रा इकेडा स्टेशनबाट हन्कियु टकाराजुका लाइनमा छ। उमेदादेखि यस संग्रहालयको लागि समय हरेक मार्गमा 5० मिनेट जति हुन्छ।
यस संग्रहालयमा, तपाईं आफ्नो प्राथमिकता अनुसार आरक्षण तत्काल नूडल्स बनाउन सक्नुहुन्छ (आरक्षण आवश्यक छ)। मूल कप चाउचा (रिजर्भेसन अनावश्यक) बनाउनको लागि त्यहाँ कुना पनि छ।
यहाँ, मोमोफुकुले आफ्नो घरको बगैचामा खोलिएको अनुसन्धान झोपडी तत्काल चाउचाउ आविष्कार गर्न पुन: उत्पादन गरिन्छ। यस बाहेक, त्यहाँ धेरै कप ramen को प्रदर्शनहरु छन्।
म दुबै ओसाका र योकोहामाको संग्रहालयहरूमा गएकी छु। यी संग्रहालयहरु धेरै रोचक छन्। भर्खर धेरै पर्यटकहरू भेट्न आउँदछन्।
कपनुडल्स संग्रहालय ओसाका इकेदाको बारेमा थप जानकारीको लागि, कृपया तल क्पनुडल्स संग्रहालय ओसाका इकेडा आधिकारिक वेबसाइटमा हेर्नुहोस्। तपाईं यस साइटमा एक मूल चाउचाउ आरक्षण गर्न सक्नुहुन्छ।
Expo'70 स्मारक पार्क
TaiYOU NO TOU जापानी कलाकार तारो Okamoto द्वारा १ 1970 =० = शटरस्टकमा सिर्जना गरीएको हो
एक्स्पो 70० स्मारक पार्क २ 260० हेक्टरको विशाल पार्क हो जुन १ 1970 in० मा आयोजित वर्ल्ड एक्सपोजरको स्थलमा अवस्थित छ। यस पार्कबाट उमेदादेखि रेल र मोनोरेल करिब 30० मिनेट लाग्छ। कृपया मेट्रो मिडोसुजी लाइनमा उमेदा स्टेशनबाट जानुहोस् (कृपया शिनबाट सवारी लिनुहोस् - ओसाका स्टेशन शिन्कानसेन प्रयोग गर्ने मामलामा)। यदि तपाईंले यो सबवे लिनुभयो भने, तपाईं उत्तरी ओसाका एक्सप्रेस रेलवेको सेन्री चूओ स्टेशन जान सक्नुहुन्छ। Senri Chuo स्टेशन देखि एक्सपो पार्क को मोनोरेल द्वारा minutes मिनेट छ।
यस पार्कमा सबैभन्दा लोकप्रिय आकर्षण भनेको टावर अफ द सन हो तारो ओकामोटो (१ 1911 ११-१-1996), एक प्रसिद्ध जापानी कलाकार द्वारा निर्मित। Work० मिटर अग्लो यो कामले सूर्य र जीवनको शक्ति अभिव्यक्त गर्दछ। भित्र, "जीवनको रूख" भनिने एक विशाल काम माथिको चलचित्रमा देखिए जस्तै प्रदर्शित हुन्छ। त्यो रूखबाट, बिभिन्न प्राणी लघुचित्रण र वस्तुहरू निलम्बित छन्।
एक्सपो पार्कसँग लगभग २ hect हेक्टर जपानी बगैंचा छ जुन १ 26 .० को वर्ल्ड एक्स्पोजेन र were,1970०० गुलाब बगैंचामा जारी गरिएको थियो। एक्सपो पार्क ओसाका प्रतिनिधित्व गर्ने एक चेरी ब्लासमम ल्यान्डमार्क पनि हो।
>> एक्सपो पार्क को विवरणको लागि, कृपया तल आधिकारिक वेबसाइट हेर्नुहोस्
EXPOCITY शपिंग सेन्टर = शटरस्टकमा गुंडम मूर्ति लडाई गर्दै
एक्सपो पार्कसँग लगभग १,170,000०,००० वर्ग मीटरको विशाल जटिल "EXPOCITY" छ। २०१ 2015 मा निर्मित एक्सपो शहरमा, त्यहाँ शपिंग मल्लहरू छन् "लालापोर्ट एक्सपोसिटी" जहाँ करीव shops०० दुकाहरू अवस्थित छन् र आठ ठूला मनोरंजन सुविधाहरू छन्।
मनोरन्जन सुविधाहरू मध्ये, निम्न आकर्षणहरू छन्, उदाहरणका लागि।
NIFREL "Kaiyukan" द्वारा उत्पादित मछलीघर हो।
रेडहर्स ओसाका ह्विल
यो १२ Fer मिटरको उचाईको साथ विशाल फेरीस पा wheel्ग्रा छ।
यो मनोरन्जन सुविधा हो जुन सेगा होल्डि producesहरूले उत्पादन गर्छ।
यो एक मनोरञ्जन सुविधा हो जुन तपाईं ब्रिटिश एनिमेसन "भेडा शन" को दुनिया अनुभव गर्न सक्नुहुन्छ।
मलाई लाग्छ EXPOCITY निकट भविष्यमा एक्सपो पार्कको लोकप्रिय ठाउँ बन्नेछ। थप रूपमा, २०२aka मा ओसाकामा नयाँ विश्व प्रदर्शनी योजना गरिएको छ। त्यसकारण, एक्सपो पार्क विश्वभरिबाट अझ उल्लेखनीय हुनेछ।
>> EXPOCITY का विवरणहरूको लागि कृपया आधिकारिक वेबसाइट हेर्नुहोस्